Panenteisma - Wikipedia
Ny panenteisma dia fampianarana ara-pilôzôfia sy ara-pivavahana izay ilazana an'Andriamanitra ho sady maninteraka ny faritry ny natiora rehetra no sady mihoatra azy na ara-potoana na ara-toerana. Ny panenteisma dia mihevitra an'izao tontolo izao sy Andriamanitra ho zavatra mitovy raha eo amin'ny lafiny fisiana. Tsy mpamorona na demiorga Andriamanitra fa hery mandrakizay izay manetsika an'izao tontolo izao izay endrik'Andriamanitra hita maso. Ao anatin'Andriamanitra izao rehetra izao ary Andriamanitra dia miely eran'ny faritra tsirairay amin'izao rehetra izao. Lehibe noho izao tontolo izao Andriamanitra ary izao tonto izao dia ao anatiny. Andriamanitra dia sady hery manetsika an'izao tontolo izao no vokatr'izany koa.
2 Fifangaroan'ny panenteisma sy ny panteisma
Ny teny hoe penenteisma dia fanagasiana ny teny vahiny vokatry ny fanambarana ny teny grika hoe πᾶν / pân "manontolo, tontolo" sy ἐν /en "anaty" ary θεός / theós "andriamanitra". Ara-bakiteny dia midika hoe "ao amin'Andriamanitra ny zava-drehetra". Ilay filozofa alemàna Karl Christian Friedrich Krause no namorona azy tamin'ny taona 1828 nanoratany ny boky mitondra ny lohateny hoe Vorlesungen über das System der Philosophie. Fihenerana eo anelanelan'ny panteisma sy ny teisma ny panenteisma.
Fifangaroan'ny panenteisma sy ny panteisma[hanova | hanova ny fango]
Sarotra avahana amin'ny panenteisma ny panteisma izay fiheverana fa ao amin'izao tontolo izao manontolo Andriamanitra fa tsy any ivelany na mihoatra azy . Ka noho izany dia heverina ho manana endrika panenteista sy/na panteista ny fivavahana sy ny filozofia hindoa sy ny fiheveran'ny filozofa sy ny teolojiana sasany an'Andriamanitra toa an'i Plotino sy Giordano Bruno sy i Spinoza.
↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Peter C. Rogers, Ultimate Truth, Book 1, AutorHouse, 2009 (ISBN 1438979681) Vakio eto [tahiry])
↑ Erwin Fahlbusch, Geoffrey William Bromiley, David B. Barrett, The Encyclopedia of Christianity pg. 21, Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999 (ISBN 0-8028-2416-1) Vakio eto [tahiry]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Panenteisma&oldid=1014144"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 07:16 ity pejy ity.